Global Voices teny Malagasy · 16 Desambra 2010
16 Desambra 2010
Tantara tamin'ny 16 Desambra 2010
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana16 Desambra 2010
Tsy fanta-daza eo amin'ny fanenjehana mpitoraka blaogy fotsiny ny governemanta Iraniana, fa mitàna ny laharana voalohany koa izy ireo eo amin'ny sehatra maro: nanomboka tamin'ny fampidirana am-ponja ny mpitoraka blaogy voalohany indrindra teo amin'ny tantara, hatramin'ny nahafatesan'ny mpitoraka blaogy voalohany tany am-ponja. Mampalahelo anefa, fa mbola misy zavatra hafa mbola...
Toetrandro tsy nahazatra loatra narahan-tafiotra no nanamarika ny herinandro lasa teo tany amin'ny faritra maro tany Levant, raha nirotsaka ny orana efa nandrasana ela sy ny ranomandry tsy nampoizina nandrakotra izay rehetra taka-maso. Tao an-drenivohitra Siriana, sambany rakotra ranomandry indray ny arabe rehetra raha tsy nisy izany an-taona maro. Tao...
Toetrandro ririnina henjana tokoa no namely ny faritra isan'ny lehibe indrindra tao Israely tamin'ity herinandro ity (Avy amin'ny mpandika: Lahatsoratra nivoaka tamin'ny 15 Desambra 2010), narahana tafio-drivotra nahery vaika, orana ary tafiotran-dranomandry, nitera-pahavoazana nanerana ny firenena manontolo. Tany Avartra, rakotra ranomandry matevina izay tsy mbola hita teto amin'ny firenena tao...